UZakwe usolwa nguphrojusa ngamanga
UPHROJUSA ophinde abe nguDJ wehip hop, uNgane Sikobi uthe uZakwe ufuna ukuzwelwa emculweni ngoba esehlelwe yizinga uma ethi wahlukumezeka ngoba akulona iqiniso lokho
THOKOZANI NDLOVU | August 12, 2018
UBHOBOKA ngezinkinga zomrepha uZakwe, uphrojusa ophinde abe nguDJ we-hip hop, uNgane Sikobi othi ucasulwa wukuthi uZakwe akalikhulumi iqiniso ngoba efuna ukudatshukelwa ngenxa yokwehla kwezinga lakhe emculweni.
Lokhu kuqhamuka ngemuva kokuba Isolezwe ngeSonto libhale ngoZakwe ophumele obala ngokuthi utshwala bucishe baqeda ikusasa lakhe emculweni ngenxa yezinkinga abebhekene nazo ngenxa yokuboshwa yinkampani abekuyona.
UNgane uthe kungamanga aluhlaza ukuthi uZakwe uke waba nezinkinga emculweni waze wazinikela otshwaleni abebuthola ngokuphuziswa abangani.
“Inkinga kaZakwe ukuthi usegxekwa ngabantu abathi izinga lakhe lomculo selehlile njengoba ashiya iNative Rhythms ayefakwe yimina kuyona ngoba ngazana nomphathi wayo uSipho Sithole. Ngenxa yalokhu kugxekwa usefuna ukudatshukelwa kube sengathi ubehlukumezekile enkampanini kaSithole kube kungenjalo. Lezinto azishoyo ukuthi inkampani yambopha yindlela yokuzama ukungcolisa igama lami nelikaSithole okuyithina esimakhile emculweni. Ngisho ekhuluma kwabezindaba akawabali amagama ethu njengabantu abamsizile emculweni ngoba ulwa nathi,” kusho uNgane.
Uthe nokuthi ubesephila ngokuphuza utshwala abebuthengelwa ngabantu kungamanga aluhlaza.
“Kubangani bakhe uZakwe akekho obenemali ngaphandle kwakhe. Uyena obethengela abantu utshwala. Kukhona abanye engike ngixoxe nabo abangitshela ukuthi wabafaka nasezidakamizweni ngoba kunguyena obethenga yonke into uma enabo,” kuqhuba uNgane.
Ethintwa uZakwe ushaye ungqimphothwe ngokuthi ubenenkinga yokuboshwa yinkampani abekuyona.
“Engangizama ukukuchaza ukuthi ngibe nengcindezi sengiphumile enkampanini ngingazi ukuthi ikusasa lingiphatheleni emculweni. Okokuthi yimina obethengela abantu utshwala ngicabanga ukuthi naye uNgane akanalo iqiniso lalokho ngoba ubejwayele ukungifica nginezinsizwa ebesihlala nazo siphuza. Okusho ukuthi yena ubezitshela ukuthi yimina othenge utshwala,” kusho uZakwe.
Uthe kungenzeka ukuthi uNgane usenesilonda sokuthi washiya enkampanini usafisa abuye.
Ngezinsolo zezidakamizwa, uthe ubengazi ukuthi isimo sesibi kangaka phakathi kwakhe noNgane ukuthi angaze athi ubethengela abantu izidakamizwa, athi akulona iqiniso.
Odabeni olwedlule uZakwe uveze ukuthi izinkinga enkampanini iNative Rhythms zenze waze washiya nenkampani ayisungula noNgane, iSphethu Entertainment.
UNgane uthe uZakwe wayengasayinile njengomculi kwiSphethu kodwa wayengumphathi. Uthe ngesikhathi ehamba wabhala incwadi esho ukuthi uyayiyeka inkampani ngoba uyabambezeleka emculweni okuyinto engahlangene nezinkinga athi ubenazo. Isolezwe ngeSonto linayo ikhophi yale ncwadi uNgane athi yabhalwa wuZakwe.
UZakwe uvumile ukuthi washiya kungekho nkinga kwiSphethu Entertainment. Manje usengaphansi kweMabala Noise engaphansi kwe-Universal Music njengoba esanda kukhipha iCebisa ngaphansi kwayo.